फ्रि–भिसा र टिकट नाममा मात्रै सीमित, ११ महिनामा ठगीका १९ सय उजुरी ! -
फ्रि–भिसा र टिकट नाममा मात्रै सीमित, ११ महिनामा ठगीका १९ सय उजुरी !
काठमाडौं– सरकारले तीन वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको हकमा फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट लागू गरेको थियो। ३ वर्षअघिदेखि लागू गरेको भनिएपनि हालसम्म कार्यान्वयन तहमा भने यो व्यवस्था पूर्णरुपमा लागु हुन सकेको देखिँदैन।
नेपाली कलाकार को कुन कार चढ्छन्, बजार मुल्य कति ?...
देउवाको अर्को प्रस्तावः बेरोजगार युवालाई मासिक २ ह...
जापानीहरु किन लामो आयु बाँच्छन् भनेको यस्तो पो रहे...
५३ बर्षको उमेरमा कक्षा ३ पढ्दै करोडपति गोमा ! कारम...
ग्यास बुलेट पल्टिँदा सडक किनारमा हिँडिरहेका आमा छो...
आगोमा फसेकी बालिकाको मृत्युअघि अन्तिम शब्द –‘आइ लभ...
Prevविदेशमा रोड खन्नुभन्दा घरमै बाख्रा चराउछु !
Nextप्रचण्ड ले गरे सबैलाइ चकित पार्ने घोषणा
हामीले बालेको दियोले परदेशमै ज्यान गुमाएकाको आत्माले शान्ति पायो होला त ?
विदेशबाट सामान ल्याउँदा के के मा भन्सार लाग्दैन ? कुन कुनमा भन्सार लाग्छ ? हेर्नुस लिस्ट यसप्रकार छ …
विदेश देखि पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् आजको विनियम दर (सूची सहित) [पढेर सेयर गर्नुहोला